Ihe kpatara ndi ahia na ndi ahia gha acho Cloud ERP | Martech Zone
Ndi isi ahia na ndi ahia bu ihe ndi di nkpa na nbata ulo oru. Ngalaba ahia na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịkwalite azụmahịa, ịkọwapụta onyinye ya, na ịtọlite ​​ndị iche ya. Ire ahia na - eweputa mmasi na ngwa ahia ma meputa ndu ma obu olile anya. Na egwu egwu, ndị otu ahịa na-elekwasị anya n'ịtụgharị atụmanya ịkwụ ndị ahịa ụgwọ. Ọrụ ndị ahụ nwere njikọ chiri anya ma dị oke mkpa maka ọganiihu azụmaahịa niile.
N'iburu mmetụta ahịa na ire ahịa nwere na njedebe, ọ dị mkpa na ndị na-eme mkpebi bulie oge na talent ha nwere, na ime nke a, ha ga-enwerịrị nghọta banyere otu ndị otu na-arụ n'ofe ngwaahịa ahụ dum. Ọganihu na nkà na ụzụ emeela ka ọ dịrị ya mfe inweta ezigbo oge ịnweta ozi gbasara ndị ọrụ azụmaahịa na ndị ahịa. Karịsịa, igwe ojii ERP nke dabeere na igwe ojii na-enye uru ndị a.
Gịnị Bụ Igwe ERP?
Cloud ERP bụ sọftụwia dị ka Ọrụ (SaaS) nke na - enye ndị ọrụ ohere ịnweta sọftụwia Enterprise Resource Planning (ERP) n’elu ịntanetị. Igwe ojii ERP n'ozuzu nwere ọnụ ala dị elu karịa n'ihi na a na-agbazinye akụrụngwa site na ọnwa kama ịzụta ya kpamkpam ma debe ya. Igwe ojii ERP na-enyekwa ụlọ ọrụ ohere ịnweta ngwa ahịa ha dị oke egwu n'oge ọ bụla site na ọnọdụ ọ bụla na ngwaọrụ ọ bụla.
Kedu ka igwe ojii ERP si agbanwe?
Mmasị na ịnabata igwe ojii na njikwa azụmaahịa mkpanaka adịla -eto eto n'afọ adịbeghị anya. Ọganihu na-arịwanye elu na nkà na ụzụ ebuliwo ihe achọrọ maka ngwaọrụ ejikọrọ na data oge iji nyere aka gwa mkpebi azụmahịa dị mkpa. Ojiji nke igwe di nma dika ekwenti, mbadamba, na ihe ndi ozo di iche agbanweela ebe oru.
Kemgbe COVID-19 oria ojoo, ina achọ igwe ojii na agwugwo agagharị nwere gbawara. Mkpa ọ dị ịzụ ahịa azụmaahịa site na ebe ọ bụla na oge ọ bụla emeela ka mkpa maka igwe ojii njikọta. Ọchịchọ a emeela ka usoro ngwanrọ nke azụmahịa azụmaahịa na-akwado ngwa ngwa nke na-akwadebe ndị ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ site na mpụga ọfịs ma nọrọ na-emelite na data ụlọ ọrụ na ezigbo oge. Gartner na-ebu amụma na ọha mmadụ ga-agbasa ego igwe ojii ga-eto site na pasent 6.3 na 2020. Ọzọkwa, ngwanrọ dị ka ọrụ (SaaS) ka bụ akụkụ ahịa kachasị ukwuu ma na-ebu amụma ịbawanye $ 104.7 ijeri na 2020.
Acumatica ghọtara na ọ dị mkpa maka igwe ojii na ihe ngagharị site na ntọala ya na 2008, ma na-emeziwanye ihe ngwọta ya iji mee ka ọrụ mmepe nke azụmaahịa midmarket dịwanye mma. Naanị na Septemba gara aga, dịka ọmụmaatụ, Acumatica kwupụtara mwepụta nke Acumatica 2020 R2, nke abụọ nke mmelite ngwaahịa ya abụọ.
Ọhụrụ ntọhapụ ngwaahịa mejupụtara ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke mmelite, gụnyere:
Mmekọrịta na ngwa eCommerce na-eduga Shopify
Akụrụngwa AI / ML nyeere Aka Aka Akaụntụ Ejiri akwụ ụgwọ Akaụntụ, nke na-eme ka ọ dị mfe etu ndị ọrụ si akwadebe data enwere ike ileba anya na dashboard, nyochaa na tebụl dị mkpa, ma jiri ya maka ọkwa oge.
Nwa afọ zuru ezu Ngwọta ngwanrọ POS nke na-enye ndị na-ere ahịa ezigbo nnweta nnweta, ọtụtụ ebe, yana njikwa nkwakọba ụlọ na njedebe nyocha na nyocha barcode. Ugbu a, ndị ọrụ nwere ike ijikwa ahụmịhe ọwa-ihe zuru oke na-enweghị ndị ọrụ onsite.
AI / ML nyeere njikwa mmefu dị elu, nke na-etinye faili ntanetịime elektrọnik maka kaadị ụlọ ọrụ ma na-ewepụta ihe e kere eke na-emepụta ihe iji meziwanye usoro maka ndị ọrụ ekwentị mkpanaka yana ndị ọrụ nyocha ụlọ ọrụ na-azụ azụ.
Njikwa mmefu dị mkpa ugbu a na ngalaba ngalaba ụlọ ọrụ ego. Ọrịa ọgbaghara COVID-19 emeela ka ụlọ ọrụ tinye ọhụrụ mesiri ike na njikwa mmefu, na-elekwasị anya na ịchọta ebe maka nchekwa ego. Ihe omume a na-enwetụbeghị ụdị ya na afọ a emeela ka ọ dị mkpa maka azụmahịa iji tinye ego na nhụta ka mma, njikwa ọnụahịa ka mma, na akpaaka. Ndị isi azụmaahịa chọrọ akụrụngwa, ugbu a karịa mgbe ọ bụla, iji mee mkpebi azụmaahịa mara nke ọma. Acumatica ọhụrụ igwe ikike mmụta ga-akawanye oge, na-amụta site na ntuziaka ntuziaka nke data mbubata na-emezi ka usoro ego nkịtị na-echekwa ego ego.
Kedụ ka igwe ojii ERP nwere ike isi kwado ahịa na ire ahịa?
Igwe ojii ERP nwere ike inye ndị otu ahịa echiche zuru oke nke ohere, kọntaktị, na mmemme niile na-emetụta mkpebi ahịa. Na mgbakwunye, ọrụ ndu na arụ ọrụ nwere ike inye aka jikwaa usoro ire ahịa iji melite arụmọrụ. Ngwa ERP na - eme ka ihe ọmụma dịwanye mma, belata usoro ahịa, ma nwekwa ọnụego dị nso.
Maka ndị otu ọrịre, igwe ojii ERP nwere ike ịkwado azịza ahịa agbakwunyere, jikọtara ya na njikwa ego na njikwa ọdịnaya. Inwe ihe omuma ahia zuru oke nwere ike imeziwanye mmekorita n'etiti ahia, ahia, na nkwado ma na-achota oke ROI maka ahia ahia obula. N'iji usoro ERP, ndị ahịa na-azụ ahịa nwekwara ike ịkwalite sistemụ Njikọ Ndị Ahịa (CRM) iji jikwaa ndu, melite ntụgharị, tụọ arụmọrụ mkpọsa, ịkpọtụrụ ndị ana-akpọ, ma melite arụpụta. Ha nwekwara ike ijide ndu site na mpempe akwụkwọ weebụ, ndepụta ndị azụrụ, mgbasa ozi, ozi ziri ezi, ihe omume, na isi mmalite ndị ọzọ.
N'ihi usoro ihe owuwu weebụ ha, ọtụtụ igwe ojii ERP na-eweta na API maka ngwangwa ngwangwa na ngwa ọrụ na mmemme ndị ọzọ dị oke mkpa. Uru ndị ahịa na ndị ahịa na-ere ahịa dị ọtụtụ, gụnyere itinye ngwa ngwa ma dịkwa ọnụ ala karịa na oge na-aga ngwa ngwa maka usoro mkpanaka. Site na itinye ígwé ojii ERP ngwọta, ndị ahịa na ndị ahịa nwere ike ịnweta njikwa dị ukwuu na usoro ha na nghọta ka mma banyere arụmọrụ ha n'oge. Ha nwere ike ime ka arụpụta ha dị elu site na ịnye ndị ọrụ ntanetị ohere ịnweta ozi ọhụụ site na ebe ọ bụla na-eji ngwaọrụ ọ bụla n'oge ọ bụla.
Tags: acumaticaAPIego echekwaraERPnjikwa mmefumarketingahia erpngwanrọsalesụlọ ahịa